बच्चामा खानाको अरुचि भको छ ? यसरी हटाऊँ - ज्ञानविज्ञान
बच्चालाई खानामा अरुचि र भोक नलाग्नुमा उनीहरुको गल्ति हुँदैन । अभिभावकको कमजोरीको परिणाम हो यो । हरेक आमाको चाहना हुन्छ, बच्चाले राम्ररी खाना खाइदेओस् । बच्चाले भरपेट खाना खाएपछि आमाको मन पनि अघाउँछ । तर, अक्सर बच्चाहरु खाना खान मानिरहेका हुँदैनन् ।
आमा र उनका अभिभावक जबर्जस्ती खुवाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । अक्सर अभिभावक केवल खानाको मात्रामा ध्यान दिन्छन् । तर, त्यसको स्तरबारे ख्याल गर्दैनन् । किनभने, बच्चालाई सानै उमेरदेखि स्वस्थ बानीमा अभ्यस्थ गराउनुपर्छ । बच्चाको खानपानमा लापरवाही गर्नु हुँदैन ।
समय तालिका निश्चित गरौं
१. बच्चालाई सानै उमेरदेखि निश्चित समयमा खाना खाने कुरामा अभ्यस्थ गराउनुपर्छ । बिहान उठेपछि दिनभर के-के खुवाउने भन्ने निश्चित गर्नुपर्छ ।
२. एउटा तालिका तयार गर्नुपर्छ, सोहीअनुसार खुवाउनु पर्छ । र, बच्चालाई तलतल लाग्ने समय ठम्याउन सक्नुपर्छ ।
३. चकलेट र आइसक्रिमको असर
४. चकलेट, कुकिज र आइसक्रिमले बच्चाको भोक हराउँछ । यी खानेकुराको सेवनले बच्चाले धेरै क्यालोरी हासिल गर्छन् । सोही कारण उनीहरुलाई समयमा भोक लाग्दैन ।
परिमाण र गुणस्तर
१. बच्चालाई लन्च वा डिनरमा आवश्यकताभन्दा बढी खाना दिनु हुँदैन । त्यसले उनीहरुको पाचन यन्त्रलाई असर गर्छ । निश्चित समयमा भोक पनि लाग्दैन ।
२. घरमा बनाइएको खानेकुरा बच्चाले जति खाए पनि असर नपर्ने अभिभावकको सोचाइ हुन्छ । तर, त्यो सोचाइ गलत हो ।
३. खानेकुरा जतिसुकै पौष्टिक भए पनि उचित मात्राभन्दा बढी भयो भने हानी गर्छ । पाचन प्रणालीमा त असर गर्छ नै, त्यसपछिको उसको खाने तालिका पनि गडबड हुन्छ ।
४. त्यसैले ठीक समयमा उचित मात्रामा खाना खुवाउनुपर्छ ।
स्वस्थ खानामा ध्यान दिनुपर्छ
बच्चालाई खानामा अरुचि हुने एउटा कारण हो, उसका निम्ति राम्रो डाइट चार्ट फलो नगर्नु । दिनमा तीन पटक भरपेट खाना दिनुहोस् । दुई पटक खाजा खुवाउनोस् । यसले गर्दा बच्चाको पाचनयन्त्र तन्दुरुस्त रहन्छ । ठीक समयमा भोक पनि लाग्छ । खाना खुवाउनासाथ तुरुन्तै फलफूल दिनु हुँदैन ।
जंकफुडको लतको कारण
बच्चालाई जंकफुडको लत लाग्नुको कारण अभिभावक नै हुन् । बच्चालाई भोक लागेका बेला जंकफुडको तलतल लाग्ने गर्छ । उनीहरुलाई भोक लागेपछि खेल्न र पढ्नमा ध्यान जाँदैन । उनीहरु खानेकुराको परिकल्पना गर्न थाल्छन् । यही क्रममा उनीहरुले बजारमा देखिने वा टीभीमा विज्ञापन आउने मीठा खानेकुरा सम्झिन थाल्छन् । र, त्यही खानेकुरा खाने इच्छा जाग्छ । समयमा खाना खुवाउने हो भने भोक महशुस हुँदैन र जंकफुडको साटो पढ्ने, खेल्ने र रमाइलो गर्नेतिर उनीहरुको ध्यान मोडिन्छ ।
Topics #अरुचि #बच्चा
Don't Miss it कस्तो छ तपाईंले जिउ पुछ्ने तौलिया ?
Up Next मोटोपन र क्यान्सरको जोखिम कम बाल्यकालको व्यायामले
घरैमा सर्वसुलभ प्याज कपालको सुन्दरताका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने कमैलाई थाहा होला । कपाल लामो बनाउन जसलाई पनि मन पर्छ…